sosegado : သွားလေ့ရှိသော နေရာများ
ခဏခဏရောက်တဲ့ မြို့ဒေသတွေမှာ အဲဒီမြို့ကိုရောက်ရင် သွားလေ့ရှိသော နေရာများ ရှိပါတယ်၊ ဘယ်မြို့ကိုရောက်ရင် ဘယ်နေရာကို သွားလိုက်ရမှ၊ အဲဒီနေရာကို မရောက်ရင် အဲဒီမြို့ဒေသကို မရောက်သလိုပါပဲ။ သွားလေ့ရှိသော နေရာများဟာ အဲဒီမြို့ဒေသရဲ့ နာမည်ကြီးနေရာတွေ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီနေရာတွေကို ကိုယ့်ကြိုက်နှစ်သက်လို့၊ ကိုယ့်အတွက် စိတ်ရောလူရော သာယာကြည်နူး အေးချမ်းစေလို့၊ ကိုယ့်အတွက် အမှတ်တရဖြစ်စေလို့ သွားတာဖြစ်ပါတယ်၊ လူတစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အကြိုက်ချင်းမတူကြလို့၊ သွားလေ့ရှိသော နေရာများလဲ တူကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ကို အလုပ်သဘောအရ ခဏခဏရောက်ဖြစ်ပါတယ်၊ အလုပ်သဘောအရ ဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့၊ ဂျပန်တွေနှင့် လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ပင်ပန်းပါတယ်၊ အဲဒီအတွက် စိတ်အမောဖြေစရာ တိုကျိုမှာ သွားလေ့သွားထရှိတဲ့ နေရာလေးတွေ ရှိပါတယ်။
ညနေပိုင်းနှင့် ညပိုင်းအားရင် လမ်းဘေးသီချင်း၊ လမ်းဘေးအက၊ ဂီတတွေကို သွားပြီး ကြည့်ရှု နားထောင်တာပါပဲ၊ (Free entertainment)
သွားလေ့သွားထရှိတဲ့ နေရာတွေက ရှင်ဂျုကု shinjuku ၊ ရှီဘူရ Shibuya တို့ဖြစ်ပါတယ်၊
ဆန်းဒေးနှင့် ဆုံရင်တော့ ဟာရာဂျုကု Harajuku ထိရောက်ပါတယ်။
မနက်ပိုင်း အချိန်ရရင် ကာမာကူရ Kamakura ကိုသွားပြီး ဘုရားသွားဖူးပါတယ်၊ ရထားတော့ ရှည်ရှည်စီးပြီးသွားရသည်၊ ပထမဦးဆုံး သွားတဲ့အခေါက်က မှတ်မိစရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဂျပန်ကိုအရင်ရောက်နေတဲ့၊ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က လိုက်ပို့တာဖြစ်ပါတယ်၊ အပိုဧည့်သည်တစ်ယောက်လဲ ပါလာပါတယ်၊ သူငယ်ချင်းရဲ့သူငယ်ချင်း၊ ဂျပန်ကိုမကြာသေးမှီက ရောက်လာသူဖြစ်ပါတယ်၊ ကိုမိုးလို့ခေါ်ပါတယ်။
မြန်မာတွေက ကာမာကူရ ဆင်းတုတော်ကြီးလို့ ခေါ်တဲ့ဘုရားဝင်းထဲရောက်ရော၊ အားလုံးကို ကိုမိုးက ဘိနပ်တွေချွတ်ခိုင်းပါတယ်၊ ဆင်းတုတော်ကြီး ဘုရားဝင်းထဲမှာ ဘိနပ်ချွတ်စရာမလိုပါဘူး၊ အဲဒီမှာ စကားများ ငြင်းခုံကြပါတယ်၊ နောက်ဆုံး ကိုမိုးတစ်ယောက်ထဲ ဘိနပ်ချွတ်ဝင်ပါတယ်၊ ဘုရားကိုယ်တော်ထဲဝင်တဲ့အထိပေါ့၊ ကျနော်တို့အပါအဝင် ဘုရားဖူးလာသူတွေ ဘယ်လိုပြောမလဲ၊ ခံစားလိုက်ရတာ တစ်ခုရှိပါတယ်၊ အဲဒါကတော့ ကိုမိုးရဲ့ခြေအိတ်က ထွက်လာတဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ အနံ့ပါပဲ၊ ဆောင်းတွင်းကြီးဆိုတော့ သူခြေအိတ် မချွတ်ပါဘူး၊ သြော် မြန်မာပီသမူ့၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမူ့ ထိန်းသိမ်းတာပေါ့။
တစ်နေ့တာ အစည်းအဝေးတွေ၊ ရှင်းလင်းပွဲတွေ အပြီး လမ်းဘေးသီချင်း ဂီတတွေ နားထောင်ပြီး refresh ပြန်လုပ်တာပါ၊ လမ်းဘေး entertainment တွေကို နေရာတော်တော်များများမှာ တွေ့ဘူးပေမဲ့ ဂျပန်ကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ၊ တကယ့် အနုပညာပါပြီး feel အပြည့်ဆိုတော့၊ ဂျပန်လိုနားမလည်ပေမဲ့ နားထောင်လို့ကောင်း၊ ခံစားလို့ရပါသည်။
အကြိုက်ဆုံး နေရာကတော့ ရှင်ဂျုကု ဘူတာကနေ တာကာရှီးမားရ ကို သွားတဲ့လမ်းဘေးနဲ့ စက်လှေခါးအဆင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်ဂျုကုမှာနေတဲ့ ဂျပန်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အစပြုပေးလိုက်တာပါ။
Harajuku ဟာရာဂျုကု ကိုသွားရတာက လူငယ်လူရွယ်လေး တွေရဲ့အသစ်အဆန်း ပုံစံတွေ၊ ဖက်ရှင်လို့ ခေါ်မလား တွေကိုို ကြိုက်လို့ပါ၊ တစ်ခါတစ်လေ entertainment တွေတောင်ပါသေး၊ ဟာရာဂျုကု စတိုင်က ကမ္ဘာကျော် ဖြစ်ပါတယ်။
Mix and mismatch different fashions၊ ဒီအသစ်အဆန်း ပုံစံတွေကိုကြည့်ရင်း၊ အသွင်မတူစွာ ခံစားခြင်း၊ ဆန့်ကျင့်ဘက် ခံစားကြည့်ခြင်း၊ ထိုးဖေါက် ခံစားကြည့်ခြင်း ကို သဘောပေါက်လာပါတယ်၊
ဒါမျိုးကြီးပဲ လုပ်နေတာ၊ ဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်မရဘူးလား ခွဲထွက်ကြည့်ပါတယ်။ Box ထဲကထွက်လာတဲ့ အတွေးတွေပါပဲ။
လူအများက ဒါပဲဒါပဲ လုပ်နေတဲ့ အခါ၊ တစ်ခြားဘက်က ဘာလဲဘာလဲ ဆိုပြီး မျှကြည့်တတ်လာတယ်။
နောက်ပြီး ဂျပန်လူငယ်တွေဟာ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခြင်း၊ ခွဲထွက်စွာတွေးခေါ်ခြင်း နှင့် အမြင်သစ်၊ အသွင်သစ်တွေနဲ့ တီထွင်ကြံဆမူ့တွေဟာ ကျောင်းထဲ၊ စာသင်ခန်းထဲမှာတင် မဟုတ်ပဲ၊ လမ်းဘေးကလည်း စနိုင်တယ်ဆိုတာ လမ်းဘေးဂီတ၊ ဟာရာဂျုကု စတိုင် တွေက လေ့လာလိုက်ရပါတယ်၊ အကျိုးနှင့် အဆိုးကတော့ ဒွန်တွဲနေမှာပါ။
Harajuku, mixing different styles and mismatching colors and patterns is encouraged--you can do anything you want, as long as your outfit isathoughtful expression of your individuality.
Harajuku style originated among teens on the streets near Harajuku Station in Shibuya, Japan. It may have been brought to many people's attention by American singer Gwen Stefani, but the evolution of the style certainly didn't begin with her and it certainly won't end with her. Like many "street fashions" it is difficult to characterize, both because it is constantly changing and because it has many manifestations. There is no cookie-cutter approach to the style, but if you want to dress in Harajuku style, there have some guidelines to get you started.
ဂျပန်ရောက်ရင် ဒုက္ခ သွားပေးတာကို သည်းခံသော သူငယ်ချင်းများ TAK,MKT & KKA တို့ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။
က ခ ဂ
Posted by sosegado at 3/12/2010 10:18:00 PM
Labels: travel, သွားလေ့ရှိသော နေရာများ
free entertainment ကို
ိုသဘောကျလို့ ရောက်တဲ့နေရာမှာ နားထောင် ဖြစ်တယ်...
သွားချင်လိုက်တာဗျာ... လေ့လာချင်တာတွေအများကြီးရှိတယ် ပထမဆုံးက ဇင်ဝိပဿနာအကြောင်း ၊Tokyo လေဆိပ် ၊ အကိုပြောတဲ့ လမ်းဘေးဂီတာဆရာတွေ ၊ ပြီးတော့ yakuza တွေနဲ့လည်း တွေ့ချင်သေးတယ်...
အခွင့်အခါ သင့်ခဲ့ရင်တော့ တကယ်ကို သွားလည်ချင်ပါတယ် အစ်ကိုရေ...အခုလိုမျှဝေပေးတာလည်း ကျေးဇူးပါ...
ဓါတ်ပုံထဲက ဂျပန်မလေးတွေကတော့ အလှသားဗျ..
ဗဟုသုတဖြစ်စရာ မို့လို့ စိတ်ဝင်တစားဖတ်သွားပါတယ်
ဂျပန်ကို ကိုယ်တိုင်မရောက်ဖြစ်သေးပေမဲ့ ဂျပန်တွေနဲ့ အကြာကြီး တွဲ အလုပ်လုပ်ဖူးတာမို့ ဒီပို့စ်လေးကို ပိုနှစ်သက်မိပါတယ်
မမ တွေ့ဖူးတဲ့ ဂျပန်မတွေကတော့ အချောစားတွေ များတယ်ရှင့်..း )..
ဒီပုံထဲက ကလေးမတွေထက်အပုံကြီးသာတာပေါ့ :)...
ကျနော် တို့ ရောက်ဖို့တော့ မနီးစပ်ပါဘူးဗျာ ဒီလို စာဖတ် ရင်း ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့ ဗဟုသုတ ရှာရတာပေါ့ဗျာ
ဂျပန်လူငယ်တွေရဲ့ လွတ်လပ်မူ့ ကိုအားကြမိပါရဲ့၊ ဒီမှာကတော့ လူလေးနဲနဲ စုစုဖြစ်သွားရင် ရောက်လာတော့တာပဲ၊ အသွင်သစ် အမြင်သစ်တွေနဲ့ တီထွင်ကြံဆမူ့တွေ ဝေးပါသေးတယ်၊
ကိုဆိုဆီဂါးဒိုးရေ လာလည်ချင်စိတ်ပေါက်အောင်ကို အေ၇းတော်ပါတယ်ဗျာ ပုံတွေကလည်းလန်းတယ်နော်
မရောက်ဖူးတဲ့ အရပ်ဒေသမို့လည်း စိတ်ဝင်စားစရာ
အားလုံးကို စိတ်ဝင်တစား လာဖတ်သွားတယ်ရှင်..
တနေ့က လာဖတ်ပြီးသားဗျ၊ ခုမှ လာမန့်ရတယ်၊ ဂျပန်သွားချင်တယ် ပိုက်ပိုက် စုရအုံးမယ်....:)
အရင်တုန်းက ကျောင်းသွားရင်း နေ့တိုင်းမြင်နေတော့ သိပ်သတိမထားမိတော့တဲ့အရာတွေကို အခုလို sosegadoက ကွက်ကွက်ကင်းကင်း စိတ်ဝင်စားအောင် ရေးထားတာ တော်လိုက်တာလို့ ချီးကျူးမိသွားတယ်။
အစ်မတို့လည်း ဘုရားကို သူငယ်ချင်းတွေကို လိုက်ပို့တိုင်း
ဘုရားမှာ ဖိနပ်ချွတ်မချွတ်နဲ့ သေချာထိုင် ၀တ်ပြုသင့်မသင့်အမြဲ အငြင်းပွားရတယ်။
ဘုရားပုံလေး တင်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါနော်
မိုးအရမ်းဖူးချင်တဲ့ဘုရားပုံလေးဖြစ်လို့ ပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ တစ်နေ့ ကိုယ်တိုင်ဖူးချင်ပါတယ်။